Shina: Hetsika lehibe manohitra fananganana orinasa mpamokatra akora shimika any Dalian · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2011 19:48 GMT
'PX ivelan'i Dalian izao dieny izao!'
Efa-taona taorian'ny fihetsiketsehana mitovy amin'ity tany Xiamen, dia maro dia maro ny mponina ao Dalian any avaratr'i Shina no nidina an-dalambe ny alahady ho fanoherana ny fananganana orinasa mpamokatra p-Xylene ao Fujia p-Xylene izay heverin'izy ireo fa akaiky loatra ny tanàna. Nilaza ny manampahefana ny herinandro lasa teo fa hafindra toerana ny orinasa, saingy tsy mbola nolazaina kosa hoe aiza ny toerana heverina hamindrana azy.
Ny tena nampanahy ny olona nahatonga ny fihetsiketsehana androany (alahady) dia noho ny vitan'ny Rivodoza Muifa tamin'ny herinandro, izay notaterin'ny fantsom-baovao ho mampitera-doza ny orinasa mpamokatra akora shimika. Nibahan-toerana tamin'ny valantserasera nandritra ny alahady maraina ny sary sy ny vaovao farany avy tany Dalian, ary dia nahery vaika tokoa ny famafana ny vaovao mifandraika tamin'izy ity nataon'ny Sina Weibo ary tonga hatramin'ny fanafoanana kaontin'ny mpisera nialoha ny mitataovovonana.
Tsy tafiditra tambajotra ihany koa ny finday araka ny tatitra teo amin'ny kianjam-bahoaka tao Dalian, izay niaingan'ny hetsika nialoha ny hidinany an-dalambe.
Araho ny mpisera Twitter @WLYeung, FMN breaking news, @mightyboom ary MissXQ amin'ny vaovao voadika (teny anglisy) avy any amin'ny hafa teny an-toerana. Efa misy manangona ihany koa ny sary avy any Dalian ary azo jerena ato ary hita ihany koa amin'ny fanarahana tenifototra Twitter #大连px [fanampiny: msy sary hafa ato ary sary +100 ato].
12:45 Alina sary nivoaka farany: